RW Saacid oo wacad ku maray iney dib u qabsanayaan magaalada Xudur oo u gacan gashay Al-Shabaab |
RW Saacid oo wacad ku maray iney dib u qabsanayaan magaalada Xudur oo u gacan gashay Al-Shabaab
Raisul wasaaraha xukuumada Somalia Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa sheegay in ciidamada dowladiisa ay xili dhow dib ula wareegi doonaan magaalada Xudur ee gobolka Bakool oo sanad ka dib ku laabatay gacanta Al-shabaab ka dib markii ay isaga tageen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowlada ee gacanta ku hayey.
Waxaa uu sheegay raisul wasaaraha in xukuumadiisa ay wado qorsheyaal ay dib ugu qabsaneyso magaalada Xudur ee gobolka Bakool, isagoo xusay inaan la aqbali Karin magaaladas iney sii joogaan xoogaga Al-shabaab oo uu ku eedeeyey iney dhibaato xoogan ku hayaan shacabka magaaladaas jooga.
“Markii kooxaha nabadiidku galeen galeen Xudur waxay bilaabeen iney dhibaatooyin u geystaan shacabka, waxay dileen sheikh ka mid ah culumaaudiinka magaaladaas oo imasam ka ahaa masaajid dad kale oo badana wey xireen, arintaas waanu cambaareynaynaa, umana dulqaadan doono” ayuu yiri RW Saacid oo war ka soo saaray xafiiskiisa magaalada Muqdisho.
Waxaa uu intaa ku daray Raisul wasaaraha in dilka Shiikh C/raxmaan Macallin Mursal oo 75-jir ahaa uu yahay mid fool xun oo ay geysteen kooxo uu ugu yeeray manaxeyaal caadeystay iney si aan kala sooc laheyn u laayaan shacabka Soomaaaliyeed, isagoo xusay in dhowaan la dardar gelin doono howlgalada ay dowladu kula wareegeyso degaanada gacanteeda ka maqan.
“Nagama horjoogsanayo falkan foosha xun inaan horay u socono, waxaan ka shaqeynaynaa sidii ciidamada dowladda Somalia iyo kuwa taageeraya ay dib ula wareegi lahaayeen degmada Xudur, waana ka saareynaa” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo aan xusin xiliga ay ka saarayaan.